Iwu Spamming: Nkọwa nke US, UK, CA, DE, na AU | Martech Zone
Ka akụ na ụba ụwa na-aghọ eziokwu, a na-edebanye aka na nkwekọrịta nke na-ahụ na mba ọ bụla anaghị asọpụrụ iwu nke onye ọzọ - ha nwedịrị ike ịme ntaramahụhụ megide ụlọ ọrụ ndị mebiri iwu ndị ahụ. Otu ebe nlebara anya maka ụlọ ọrụ ọ bụla na-eziga email mba ụwa bụ ịghọta nuances nke mba ọ bụla dịka ọ na-ezo aka na email na spam.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ileba anya n’igbe ntinye igbe na aha ọma gị n’uwa niile, gbaa mbọ banye na ya 250ok. Ha nwere mkpuchi ISP zuru ụwa ọnụ na ngwọta ha ma ga-enyocha IP gị na-eziga megide ndị na-ede aha ojii.
Ihe jikọrọ gafee mba niile bụ iji hụ na ịdekọ etu ndị debanyere aha gị si banye, ebe ha banyere, ma na-aga n'ihu na-enwe ndepụta email dị ọcha - na-ehichapụ ozi ịntanetị na-adịghị mma na data gị. Ihe omuma ihe omuma:
United States (US) CAN-SPAM - ejila ozi isi okwu ụgha ma ọ bụ na-eduhie eduhie, ejila usoro okwu aghụghọ, gwa ndị nnata ebe ị nọ, gwa ndị nnata otu esi apụ na ịnweta ozi email n'ọdịnihu na ịkwanyere arịrịọ ịpụ apụ ozugbo. Ozi ndi ozo: CAN-SPAM
Canada (AKA) AKW .KWỌ - zipu na adreesị email nke dabere na ikike, mata aha gị, mata azụmahịa gị, ma nye ihe akaebe nke ndebanye aha ma ọ bụrụ na achọrọ. Ozi ndi ozo: AKW .KWỌ
United Kingdom (UK) EC Ntuziaka 2003 - ezipụla ahịa na-enweghị ikikere belụsọ ma enwere mmekọrịta dị na mbụ. Ozi ndi ozo: Ntụziaka EC 2003
Iwu Spam Australia (AU) Iwu 2003 - ezipụla ozi email na-achọghị, gụnye ọrụ na wepu aha na ozi ịntanetị niile, ma ghara iji sọftụwia ihe ubi ewepụtara. Ozi ndị ọzọ: Iwu Spam 2003
Germany (DE) Iwu Nchedo Data Federal - ezipụla ozi ị na-achọghị, ị ga-enwerịrị ikike. Ezochila onye zitere gị, nye adres dị mma maka arịrịọ nwepu aha, ma nyekwa akaebe nke nbanye ma ọ bụrụ na a jụọ gị. Ozi ndi ozo: Iwu Nchedo Data Federal
The Ntụziaka European Union na Nzuzo metụtara ndị otu niile nọ na EU. Dabere na European Union Directive on Privacy, ị ga-enwerịrị nkwenye doro anya tupu izipu ozi email ọ bụla, nhọrọ ịpụ ma ọ bụ wepu aha ga-adị mfe ma doo anya maka ndị na-enweta ozi azụmahịa, ị ga-enwerịrị iwu ndị ọzọ nke mba ọ bụla. .
a ozi sitere na Nzaghachi Vertical na-egosipụta isi iwu dị iche iche nke spam na mba ndị dị na North America na Europe.
Tags: australia spam omumeaustralia spam omume 2003nwere ike-spamiwu spam iwuakpuec ntuziaka 2003europe spam iwuNtụziaka maka njikọ ndị europe na nzuzogọọmenti etiti gọọmenti etiti data nchebegermany spam iwuspamiwu spamadịgboroja iwuuk spam iwuUnited Kingdom spam iwu
Pinegrow: Edetị Desktọpụ Pụtara na Njikọ WordPress
Nke a bụ ihe kpatara I kwesiri iji jikọta ozi ịntanetị na usoro mgbasa ozi